HOUSE RENT IN9MILES (ID-1158) အား မရမ်းကုန်း တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
HOUSE RENT IN9MILES (ID-1158)
Two and Half Stories house for rent in9miles, Mayangone Township. Land area - 4200 sqft. House has Living-room, Four Master Bed-rooms, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. House with seven air-conditioners.
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ကိုးမိုင်ရှိ ငှားရန်ရှိသော နှစ်ထပ်ခွဲလုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ မြေအကျယ် - ၄၂၀၀ စတုရန်းပေရှိပါသည်။ လုံးချင်းအိမ်အတွင်း ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်းကျယ် လေးခန်း၊ ထမင်းစားခန်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့် ရေချိုးခန်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ လေအေးပေးစက် ခုနှစ်လုံးတပ်ဆင်ပါရှိပါသည်။
လုံးချင်းအိမ်၏လစဉ်ငှားရမ်းခမှာ - သိန်း ၃၀ (ညှိနှိုင်း) ဖြစ်ပါသည်။
ကိုးမိုင်ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် (ID-1158)
အမည်: HOUSE RENT IN9MILES (ID-1158)